Dhirowa System Vagadziri & Vatengesi - China Dhirowa System Fekitori
Kupfava Kuvhara Slim Kaviri Wall Dhirowa Slide
Nhanganyaya:Yakapfava yekuvhara yakatetepa kaviri madziro dhirowa inowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yekuvhara yakapfava yakatetepa kaviri madziro dhirowa inoshandisa kushandisa kudzikisira dhirowa nemagiya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M04.86
150mm kukwirira dhirowa inotsvedza inotsvedza makicheni madhirowa
Nhanganyaya:150mm kureba dhirowa inotsvedza inotsvedza inodzika dhirowa kicheni inowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati Mhando iyi yekuvhara yakapfava yakatetepa kaviri madziro dhirowa inoshandisa kushandisa kudzikisira dhirowa nemagiya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M04.150
182mm kukwirira zvakapfava zvakapfava bhokisi kicheni kabhineti simbi dhirowa
Nhanganyaya:182mm kureba zvakapfava padiki dete bhokisi kicheni kabati simbi madhirowa anowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yekuvhara yakapfava yakatetepa kaviri madziro dhirowa inoshandisa kushandisa kudzikisira dhirowa nemagiya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M04.182
Nhanganyaya:118mm simbi bhokisi dhirowa inotsvedza yakatetepa dhirowa system inowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yekuvhara yakapfava yakatetepa kaviri madziro dhirowa inoshandisa kushandisa kudzikisira dhirowa nemagiya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M04.118
Chinyararire chakapfava chekufamba sisitimu yeakaviri madziro dhirowa inotsvedza
Nhanganyaya:Chinyararire chakapfava chekufamba sisitimu yeakaviri madziro dhirowa inowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati. Iyi mhando yeakaviri madziro dhirowa inoshandisa yakavanzwa dhirowa mumhanyi ine giya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M01.199
Dhirowa bhokisi sisitimu yemadhirowa esimbi uye chinyararire chakatsetseka kudhonza kubuda
Nhanganyaya:Dhirowa bhokisi sisitimu yemadhirowa esimbi uye chinyararire chakatsetseka dhonza nzira dzinowanzoshandisa kukicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yekicheni simbi dhirowa bhokisi masiraidhi anoshandisa ezasi gomo dhirowa inotsvedza negiya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M01.86
Nhanganyaya:Ruviri rusvingo simbi inotsvedza dhirowa system inowanzo shandisa yekicheni & yekugeza makabati Mhando iyi yekicheni simbi dhirowa bhokisi masiraidhi anoshandisa ezasi gomo dhirowa inotsvedza negiya. Chinhu ichocho ndiwo masiraidhi anoshanda akanyarara akatsetseka uye akazara ekuwedzeredza ekuenzanisa pasina ruzha. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Nhanganyaya:Ruviri rusvingo tetepa bhokisi dhirowa sisitimu yekushandisa yekicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yemabhiridha ebhodhi dhirowa inoshandisa chinyararire padyo padyo inodzikisira dhirowa nemidziyo yekukiya. Iwe zvakare unogona kushandura kushandisa Push kuvhura yakavanzika dhirowa slide pamwe nepamberi clip. Chinhu chechigadzirwa ichi ndechekudzikisira dhirowa inogona kushandisa zvese dhirowa resimbi nedhirowa remuti. Unogona kusevha mutengo weiyo inventory iwe. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M02.89
Silent Soft Kuvhara Dhirowa System
Nhanganyaya:Chinyararire chinyoro chekuvhara dhirowa system inowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yeChinyararire yakapfava yekuvhara dhirowa system shandisa chinyararire zvakapfava padhuze dhirowa inotsvedza nemidziyo yekukiya. Iwe zvakare unogona kushandura kushandisa Push kuvhura yakavanzika dhirowa slide pamwe nepamberi clip. Chinhu chechigadzirwa ichi ndechekudzikisira dhirowa inogona kushandisa zvese dhirowa resimbi nedhirowa remuti. Unogona kusevha mutengo weiyo inventory iwe. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M02.185
Slim Metal Dhirowa Bhokisi Dhirowa Slides
Nhanganyaya:Slim simbi dhirowa bhokisi dhirowa masiraidhi anowanzo shandisa yekicheni & yekugezera makabati. Rudzi urwu rwakatetepa rwesimbi dhirowa bhokisi dhirowa masiraidhi anoshandisa chinyararire zvakapfava kuvhara pasi dhirowa slide nemidziyo yekukiya. Iwe zvakare unogona kushandura kushandisa Push kuvhura yakavanzika dhirowa slide pamwe nepamberi clip. Chinhu chechigadzirwa ichi ndechekudzikisira dhirowa inogona kushandisa zvese dhirowa resimbi nedhirowa remuti. Unogona kusevha mutengo weiyo inventory iwe. Kana iwe uchifarira yedu yakatetepa bhokisi dhirowa system, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Muenzaniso Nha .: M02.121